नगरप्रमुखकै नेतृत्वमा खेतान समूहको जग्गा कब्जा- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
नगरप्रमुखकै नेतृत्वमा खेतान समूहको जग्गा कब्जा
जेष्ठ ६, २०७७ नारायण शर्मा
पूर्वी नवलपरासी — गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्र पौडेलको नेतृत्वमा खेतान समूहको ३८ बिघा जग्गा कब्जा गरिएको छ । खेतान समूहले बागवानी फार्म दर्ता गरेर २९ वर्षअघिदेखि आँप र लिची फार्म बनाएको जग्गा स्वीकृतिबिनै नगरपालिकाले खेती गर्न कब्जामा लिएको हो ।
उक्त जग्गामा आँप, लिची र कटहरका बोट छन् । मंगलबार बिहान गैंडाकोट–१७ स्थित अमरज्योति स्कुलमा गरिएको भेलाले स्थानीय सुरज रेग्मीको संयोजकत्वमा जग्गा प्रयोग गर्न समिति नै बनाइएको हो । त्यसै वडाको गिद्धिनी पोस्टनजिक उक्त जग्गा रहेको छ । उक्त भेलामा नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यलगायत उपस्थित थिए । रेग्मीले आफ्नो संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनेको जानकारी दिए । ‘भोलि (बुधबार) माटो विशेषज्ञ ल्याएर देखाउँछौं, के खेती गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही सुरु गरिन्छ,’ उनले भने ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष तथा स्थानीय ठाकुरप्रसाद पाण्डेले व्यक्तिगत सम्पत्ति जग्गाधनीको सहमतिबिना कब्जा गर्न वा खेती गर्न नहुने भन्दै फरक मत राखेका थिए । ‘व्यक्तिको जग्गा उसको सहमतिबिना अन्य कसैले प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘खेतान समूहको सहमतिबिना उसको बागवानी फार्म कसरी प्रयोग गर्न मिल्छ ?’
नगरप्रमुख पौडेलले व्यक्तिको जग्गा भए पनि आफ्नो नगरपालिकाभित्र रहेकाले खेती गर्न खेतान समूहको स्वीकृति नचाहिने दाबी गरे । ‘समिति बनाएर दन्काइदिएँ, अब खेती गर्न सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
संस्थापक मोहन गोपाल खेतानले २०४५ सालमा उक्त जग्गा किनेर कृषि फार्म सुरु गरेका हुन् । त्यहाँ हिमालयन एग्रो फार्मका नामबाट फलफूलका बिरुवा रोपिएको छ । गत वर्ष पनि नगरप्रमुखकै नेतृत्वमा उक्त जग्गा कब्जा गरेर व्यक्तिलाई बाँड्ने काम भएकोमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर रोकेको थियो । त्यहाँ जग्गा फडानी र आगो लगाइदिएपछि प्रहरी पुगेपछि त्यतिबेला उक्त क्षेत्र हडप्ने प्रयास विफल भएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ १९:२४
कोरोना संक्रमित ल्याउन लागिएको भन्दै कोहलपुरमा विरोध
जेष्ठ ६, २०७७ ठाकुरसिंह थारु
नेपालगन्ज — बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा राखिएका ५९ जना कोरोना संक्रमितहरु आइसोलेसनमा जान नमानिरहेका बेला उनीहरुलाई ल्याउन लागिएको भन्दै कोहलपुरमा स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । कोहलपुरमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा उनीहरुलाई ल्याउने तयारी भएपछि स्थानीय सडकमै उत्रिएका हुन् ।
कोहलपुर वडा न. ८ स्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा यसअघि नै भारतबाट फर्केका २५ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । उनीहरु वडा न. ८ र ९ का हुन् । क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरुलाई बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा सार्ने र नरैनापुरमा रहेका संक्रमितहरुलाई तालिम केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय प्रशासनले निर्णय गरेको हो । नरैनापुरमा आइसोलेसन नभएका कारण संक्रमितलाई त्यहाँबाट सार्न खोजिएको हो ।
कृषि तालिम केन्द्रबाट अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै पहिल्यैदेखि केन्द्रमा बसिरहेका २५ जनाले पनि विरोध जनाएका छन् भने उनीहरुका आफन्तले पनि अन्यत्र लैजान नपाउने भन्दै विरोध गरेका छन् । क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुलाई बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा ल्याउन थालेको खबर पाएपछि आसपासका स्थानीयहरुले कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतलाई घेराउ गरेका थिए ।
कोहलपुर प्रहरीका प्रमुख डीएसपी कुलचन्द्र चन्दले नरैनापुरबाट कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुलाई ल्याउन लागेको भन्दै स्थानीयहरु सडकमा उत्रिएको बताए । ‘बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा राख्न खोज्यो त्यही विरोध । राम माविमा राख्न खोज्यो त्यही विरोध भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संकटका बेला स्थानीयले विरोध गर्दा काम गर्न असहज भइरहेको छ ।’
खजुरास्थित सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसन वार्ड भरिएपछि समस्या भएको हो ।
मंगलबार बसेको सुरक्षा बैठकले नेपालगन्जस्थित लायन्स डेन्टल अस्पताल र कोहलपुर नगरपालिकास्थित कृषि विकास बैंकको तालिम कक्षमा आइसोलेसन वार्ड बनाएर उनीहरुलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ १९:०७